Lalam-pirenena faharoa : olona roa indray maty nofaohin’ny taksiborosy Sprinter | NewsMada
Lalam-pirenena faharoa : olona roa indray maty nofaohin’ny taksiborosy Sprinter
Maty tsy tra-drano ireto roa lahy mpanosika kalesa nofaohin’ny taksiborosy. Tsy tafahetsika ny fiara, ireo roa lahy nivalatrapatra teo amin’ny arabe. Nentin’ny mpitandro filaminana nanaraka azy ny mpamily…
Olona roa lahy indray maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana, tany amin’ny lalam-pirenena faharoa tany Antanandava, PK faha 12 tsy hidirana an’ i Toamasina, ny asabotsy 24 marsa tokony ho tamin’ny 5 ora hariva. Taksiborosy an’ny kaoperativa “Cotisse” vao avy aty
Antananarivo nihazo an’ i Toamasina no nifaoka mpanosika kalesa roa lahy vao avy nitondra entana tany Toamasina, ka hamonjy ny fodiana ho any ambanivohitra misy azy.
Ny fanadihadiana natao teny an-toerana nandritra ny fitrangan’ny loza sy teny anivon’ny mpitatitra niresaka tamin’ny mpanao gazety no nahalalana fa nanao dona miverina ilay mpamily io ka izao nitera-doza izao.
Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny famotorana. Ilay mpamily kosa nentina niala teny an-toerana mba hiarovana ny ainy. Efa nitangorona mantsy ny olona ary naneho fahatezerana nanoloana ity tranga ity. Ny olona rahateo nilaza fa fandehanana mafy ny nahatonga ny loza. Ireo mpanosika kalesy kosa nandeha mora noho ny entany navesatra kanjo izao voafaoka izao. Ratsy ny fifandonana. Potika mihitsy ny lohan’ny fiara, ary nihantona teo ny iray tamin’ireo roa lahy, raha nipitika ny faharoa. Niapatrapatra tsy nisy afaka nanavotana azy intsony izy roa lahy.
Mahazo tsiny ny Sprinter
Tsy mitsahatra ny mahazo tsiny ny fiara Sprinter noho ny loza aterak’izy ireo. Tsy ny Sprinter loatra anefa no mamoa-doza fa ny mpamily mitondra azy no tsy mahafehy ny familiana. Ny lalana eto amintsika rahateo, rehefa tsy ratsy dia tery. Ny fiara anefa mandeha mafy ka sarotra ny fifehezana azy ary tsy mahagaga raha mamoa-doza.
Amin’ny tranga toy izao, ny fifehezana ny fitsaram-bahoaka tsy hitranga koa no tena sarotra. Mitsoaka ny mpamily no azony atao. Mazava ho azy, mampiditra am-ponja azy ny loza tahaka izao ary voaenjika amin’ny vonoan’olona tsy niniana natao izy. Indraindray anefa, afaka mora foana ireny mpamily mahavanon-doza ireny, rehefa mandeha ny raharaham-pihavanana, na ny kolikoly ihany koa. Tsy ampahafantarina rahateo ny tena vesatra azon’ny mpamily nahafaty olona, tahaka ity tany Toamasina ity.